“ကျွန်မထက်ပိုပြီးကူညီပေးခဲ့သည်င့် 2,700 တကြ် CPA ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဟာသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးပါပေါ်မှစာမေးပွဲ။”
– Bryce Welker, တကြ် CPA
သင့်ရဲ့ပထမဦးစွာကြည့်ပါတွင်တကြ် CPA စာမေးပွဲမှဖြတ်သွားဖို့ကိုဘယ်လို!
1. သင့်ရဲ့ပြည်နယ်များအတွက်တကြ် CPA လိုအပ်ချက်များကိုရှာပါ
စတင်ရန်, သင်တကြ် CPA စာမေးပွဲတွင်အဘို့ထိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်အရာကိုမြင်ရန်အရေးကြီးပါသည်ရဲ့. ထွက်ခွာသည် သင့်ရဲ့ပြည်နယ်တကြ် CPA လိုအပ်ချက်များကို to learn what you need before you can take the test.
2. ထို CPA စာမေးပွဲအဘို့အမှတ်ပုံတင်မည်
သငျသညျသေချာလုပ်ပြီးပြီပြီးတာနဲ့သင်ကစမ်းသပ်မှုများအတွက်ထိုင်နိုင်ပါတယ်, သင်အဘို့အချိန် ထို CPA စာမေးပွဲတွင်အဘို့မှတ်ပုံတင်ရန်.
3. သည်အကောင်းဆုံးတကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသင်တန်းကိုရှာပါ သင်
ရော်ဂျာတကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Roger CPA Review is my top pick for 2018. စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အများဆုံးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ပို့ချချက်နှင့်အတူ, ထို CPA စာမေးပွဲမှအံ့ဩစရာမရှိအများအပြားကျောင်းသားများကိုဆောင်ရွက်နေကြောင့်နေဖို့ရဲ့လိုအပ်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ကိုလေ့လာသင်ယူ.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြည့်အဝပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ရှုပါ ဤနေရာတွင်ရော်ဂျာတကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း.
Wiley CPAexcel အတော်လေးအချိန်အတန်ကြာများအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောအမည်များကိုတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်. အကြီးအကျယ်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဘဏ်နှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်ဒက်ရှ်ဘုတ်ကျေးဇူးတင်ပါသည်, Wiley ရဲ့တကြ် CPA prep သင်တန်းအများအပြားစာမေးပွဲတွင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသွားသုံးပါကဘာလဲ.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြည့်အဝပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ရှုပါ ဤနေရာတွင် Wiley CPAexcel.
Surgent တကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Surgent စျေးကွက်အပေါ်ကိုအကောင်းဆုံးတကြ် CPA ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးသင်တန်းများကိုတဦးကမ်းလှမ်း. စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အများဆုံးအတွေ့အကြုံရှိသင်တန်းပို့ချဖို့ကျေးဇူးတင်ပါသည်, အကြီးအသပ္ပါယ်နည်းပညာ, နှင့်မတူနိုင်တဲ့ထောက်ခံမှုနှင့်နည်းပြ, Surgent တကြ် CPA ပြန်လည်သုံးသပ်စာမေးပွဲန်းကျင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြတ်သန်းဘို့ကြီးစွာသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြည့်အဝပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ရှုပါ ဤနေရာတွင် Surgent တကြ် CPA ပြန်လည်သုံးသပ်.
သငျသညျသင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ရသောသင်တန်းအကြောင်းကိုစပ်စုဆိုရင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကူးအပေါ်ခေါင်း အကောင်းဆုံးတကြ် CPA ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးသင်တန်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စာမကျြနှာ.
အခြားအတကြ် CPA သင်တန်းပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ:
Yaeger တကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း – Becker ကကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း – အစာရှောင်ခြင်း Forward အကယ်ဒမီ – CPAexcel vs. Becker က – CPAexcel vs. Gleim
5. သီးသန့်တကြ် CPA ပရိုမိုကုဒ်တွေနဲ့ Big Save & လျှော့စျေး
ထိပ်တကြ် CPA ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးသင်တန်းများကိုမဆိုအပြည့်အဝစျေးနှုန်းပေးဆောင်မနေပါနဲ့! ကျနော်တို့ပြုစုခဲ့ကြ အကောင်းဆုံးတကြ် CPA အထူးနှုန်းများ codes တွေကို အောက်တွင်အားလုံးထိပ် rated တကြ် CPA စာမေးပွဲတွင် prep ကုမ္ပဏီများမှကနေကူပွန်ကိုသင်ပိုက်ဆံကယ်တင်ကူညီရန်.
လူအပေါင်းတို့သည်အကောင်းဆုံး Get ဒီနေရာမှာတကြ် CPA အထူးလျှော့စျေး:
6. သင်၏အတကြ် CPA လေ့လာမှုဇယားစီစဉ်
သင်တကြ် CPA စာမေးပွဲတွင်အဘို့လေ့လာနေပါတယ်သည့်အခါ, သင်သွားမယ့်နေကိုပထမဦးဆုံးအပိုင်းရွေးချယ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ဖြစ်သွားမယ့်. ဒါကြောင့်, သင်ပထမဦးဆုံးအခက်ခဲဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူပြီးမှကျူးလွန်မတိုင်မီ, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသငျသညျကိုပြောပြသောငါ၏ဆောင်းပါးကိုကြည့်ယူ အရာတကြ် CPA အပိုင်းပထမဦးဆုံးအယူ. ငါသည်သင်တို့ကိုအစဉ်အဆက်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးအကြောင်းကိုသိလိုပါလိမ့်မယ်အရာရာကိုဖုံးလွှမ်း, ကောလိပ်ကျောင်းမှငါ့အတွက်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်မှ တကြ် CPA လေ့လာမှုလမ်းညွှန်.
ထို CPA နှိပ်စက်ခြင်းမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်!
ငါပျမ်းမျှစာရင်းကိုင်ထို CPA စာမေးပွဲတွင်န်းကျင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ရှောက်သွားနိုင်သည်ကိုသက်သေပြတာပါ. ငါသည်ငါ့ဇာတ်လမ်းကိုမျှဝေဖို့နှိပ်စက်ခြင်းစတင်သင့်တကြ် CPA ခရီးများအတွက်အကောင်းဆုံးလေ့လာမှုပစ္စည်းများကိုကူညီရှာဖွေ. ငါသည်သင်တို့ကိုငါ့အတွေ့အကြုံကနေသင်ယူဖို့လိုခငျြ, ငါဖန်ဆင်းအမှားတွေကိုရှောင်ရှား, နှင့်ရှေးခယျြ သင့်ရဲ့သင်ယူမှုစတိုင်အဘို့အညာဘက်တကြ် CPA ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးသင်တန်း.
သင့်အနေဖြင့်တကြ် CPA စာမေးပွဲမှသင်တို့၏ဝိညာဉ်သည်သင်၏လူမှုဘဝဖယ်ရှားပစ်ရရန်ရှိသည်သို့မဟုတ်ရောင်းကြဘူး. ငါပေးနိုင်ခဲ့ တဝက်၌ငါ့ခြုံငုံတကြ် CPA prep အချိန်ဖြတ် အချည်းနှီးလေ့လာမှုနည်းစနစ်များဖျက်သိမ်းရေးငါ့ကိုသင်ယူကကူညီပေးခဲ့သောပစ္စည်းများထွက်ရှာဖွေနေဖြင့်. ဒါကြောင့်, ရဲ့ညာဘက်လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်သင်ရပါစေနှင့်သင့်နာမတော်ကိုလာမယ့်ကြောင်းတကြ် CPA သတ်မှတ်ရေးဆီသို့ပိုမိုနီးကပ်ရွှေ့.
ငါ့ကိုသင်ကထို CPA စာမေးပွဲမှဖြတ်သွားကူညီပါကြစို့!
အကောင်းဆုံးတကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသင်တန်းများနှိုငျးယှဉျ
တကြ် CPA လျှော့စျေးနှင့်အထူးနှုန်းများ code ကိုရယူပါ
အဆိုပါတကြ် CPA စာမေးပွဲ Pass ကိုနှုန်းဖြစ်ပါသည် ရုံ 49%
တကြ် CPA ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအများစုစနစ်တကျစီစဉ်ပေးဖို့အသိပညာနှင့်အရင်းအမြစ်များကင်းမဲ့သောကွောငျ့ရှောက်သွားရန်အလေးသာဒါနိမ့်များမှာ, လေ့လာချက်, နှင့်ဦးစားပေး.
Crush သင်မှတဆင့်တကြ် CPA စာမေးပွဲတွင်၏လေးယောက်လုံးကဏ္ဍများကိုသင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ရှောက်သွားဖို့လိုအပ်သမျှကိုတပ်ဆင်ထားဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်ဒီမှာ. စလိုက်ကြစို့!
"Bryce တကြ် CPA သင်တန်းအများဆုံးအကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်အရာဆုံးဖြတ်ခြင်းအတွက်အလွန်တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့နှင့်အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်. ထို့အပြင်သူသည်ငါ၏အလေ့လာမှုအလေ့အထက ပို. ထိရောက်သောအောင်ငါ့ကိုအသုံးဝင်သောအရိပ်အမြွက်နှင့်အကြံပြုချက်များကိုပေး၏။ "
မိုင် Penava (တကြ် CPA ကိုယ်စားလှယ်လောင်း)
"ဒီတကြ် CPA ငါတစ်နေရာတည်း၌ငါ၏တကြ် CPA စွန့်စားမှုစတင်နိုင်ရန်လိုအပ်သည့်အချက်အလက်အားလုံးခဲ့နှိပ်စက်ခြင်း. လေ့လာမှုအကြံပေးချက်များ Bryce ဘို့သင့်ကိုသိပ်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. သင်အမှန်တကယ်သင့်ရဲ့ပစ္စည်းပစ္စယကိုသိရ! ငါအခုတော့အဲဒီတကြ် CPA စာမေးပွဲနှိပ်စက်ခြင်းမှမယ်!"
ဇန်နဝါရီ Gonzalez (တကြ် CPA ကိုယ်စားလှယ်လောင်း)
“The study tips that Bryce provides have made my CPA exam experience much less stressful and helped me pass my first two sections already. ကျနော်ကျိန်းသေဒီတကြ် CPA စာမေးပွဲတွင်နှိပ်စက်မယ်!"
Lauren (တကြ် CPA ကိုယ်စားလှယ်လောင်း)
ထို CPA အကြောင်းအများစုမှာအဖြစ်များသည့်မေးခွန်းများ
အဘယ်ကြောင့်ငါတကြ် CPA ဖြစ်လာသင့်တယ်?
အဆိုပါ တကြ် CPA ဖြစ်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကို မြင်သာထင်နှင့် intangible နှစ်ဦးစလုံးများမှာ. သင်တို့၏နာမဘေးတွင်ကြောင်းသတ်မှတ်ရေးနှင့်အတူ, သငျသညျပိုကောင်းတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလမ်းကြောင်းရ, မြင့်မားလစာ, အလားတူအသိအမှတ်ပြုရွယ်တူချင်းအနေဖြင့်လေးစားမှု, ထောင့်ရုံးရာထူး secure ဖို့နဲ့အလားအလာ. ၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်များ၏သင်တန်းကျော်, CPAs အောင် $1 သူတို့ရဲ့ Non-certified ရရှိထားပြီးများထက်သန်းကပို. The C-Suite is more likely to be made up of people who are CPAs than those who lack the title—executive search firm Spencer Stuart noted roughly 45 CFOs ရာခိုင်နှုန်းတကြ် CPA ရှိ.
ပြည်နယ်အားဖြင့်တကြ် CPA စာမေးပွဲတွင်လိုအပ်ချက်ကဘာတွေလဲ?
အဆိုပါ ထို CPA စာမေးပွဲတွင်အဘို့ထိုင်ဖို့လိုအပ်ချက် အထူးသဖြင့်ပြည်နယ်မှပြည်နယ်ကနေကွဲပြားကြသည်မဟုတ်, သို့သော်အချို့ဘေးထွက်မသိချင်ယောင်အဆောင်ဆက်ဆက်ရှိပါတယ်. ဤအတကြ် CPA စာမေးပွဲတွင်လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်ခြင်းလိုအပ်, သို့သော်, တကြ် CPA ဖြစ်လာမှပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းစာမေးပွဲဖြေဆိုဘို့ထိုင်နိုင်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်. အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်, သင်လိုအပ်မယ် 150 စာရင်းကိုင်ပညာရေး၏အကြွေးနာရီ, အခြို့သောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့်အတူ. ကိုယ့်ထက်လိုအပ်ချက်များကိုပိုမိုကျိန်းသေရှိပါတယ် 150 အကြွေးဝယ်နာရီ, သင်မူကားအဖြစ်အခြေခံပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းစာမေးပွဲဖြေဆိုဘို့ထိုင်ရန်ရှိသည်ဖို့တာပေါ့.
ငါတကြ် CPA စာမေးပွဲတွင်အဘို့ကိုဘယ်လိုလျှောက်ထားကြဘူး?
ထို CPA စာမေးပွဲတွင်များအတွက်လျှောက်ထား တစ်ဦးရှုပ်ထွေးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါသည်, အထူးသဖြင့်ရက်စွဲကန့်သတ်ခြင်းနှင့်များစွာသောလိုအပ်ချက်များကိုပေးထား. လျှောက်ထားဖို့ဘယ်လိုနားလည်ခြင်းအချိန်ဇယားဆွဲနှင့်အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူကူညီကြမည်, ဒါကြောင့်သေချာသင်အခြေစိုက်စခန်း၏အားလုံးကိုဖုံးလွှမ်းစေ. အခြေခံ application ကို process ကိုကျောင်းကမှတ်တမ်းကပါဝင်ပတ်သက်, အဆိုပါအခကြေးငွေနှင့်လျှောက်လွှာတင်သွင်းခြင်း, သင့်ရဲ့ပြည်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့အနေဖြင့် AT & T လက်ခံရရှိ, getting your NTS from NASBA, စာမေးပွဲရက်စွဲများအချိန်စာရင်းဖို့ Prometric က်ဘ်ဆိုက်ကိုသွား, ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့စမ်းသပ်လေ့လာနေနှင့်တာ. အဆိုပါတကြ် CPA စာမေးပွဲလျှောက်လွှာဖြစ်စဉ်ကိုအလွန်တိကျသောသည်နှင့်ရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သေချာသင်တစ်ဦးသည် T မှအတိအကျတိုင်းအသေးစိတ်အတိုင်းလိုက်နာစေ.
ကလူတကြ် CPA စာမေးပွဲတွင်အပိုင်းပျက်ကွက်ပြီးနောက်လှုံ့ဆော်မှုကိုဘယ်လိုနေထိုင်ကြပါ?
ယင်းလှုံ့ဆော်မှုရှာဖွေခြင်း တစ်ဦးပျက်ကွက်စမ်းသပ်မှုများစွာကိုလူတို့အဘို့ကှေဲဖှယျဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက်လေ့လာနေနှင့်အတူပေါ်သယ်ဆောင်ရန်. သို့သျောလညျး, သငျသညျဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏အဆုံးတစ်မြင်သာထင်ရည်မှန်းချက်သို့မဟုတ်အဖြစ်အပျက်မှာပုံအလင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်လျှင်, ကျော် စတင်. ၏ဖြစ်စဉ်ကိုဖြေလျှော့ပါလိမ့်မယ်. လူအတော်များများဟာအနည်းဆုံးအပိုင်းကျရှုံး, ဒါကြောင့်သင်ကစမ်းသပ်တာကနေဘာကြောင့်လဲသင်သိလျှင်လေ့လာနေစောင့်ရှောက်ဖို့ဆက်ဆက်ဖြစ်နိုင်သောင်. အပိုင်းတစ်ခုပျက်ကွက်သင်တို့ကိုလည်း Fortune မဂ္ဂဇင်း၏ထောင့်ရုံးများသိမ်းပိုက်သူတစ်ဦးတကြ် CPA-များစွာသောလူဖြစ်လာမှထွက်မဖြတ်ပါပဲမဆိုလိုပါ 500 ကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏စာမေးပွဲတွေထဲကပုဒ်မပျက်ကွက်ခဲ့ကြ. ပျက်ကွက်နှင့် ပတ်သက်. အရေးကြီးအရာကိုသင်နှစ်ကြိမ်တူညီတဲ့အမှားလုပ်ဘူးသေချာစေရန်ဖြစ်ပါသည်.
ငါသည်ငါ့ "သင်ယူမှုစတိုင်" ကိုဘယ်လိုအသိအမှတ်မပြုကြဘူး?
သင့်ရဲ့အသိအမှတ်ပြု သင်ယူမှုစတိုင် သင့်ရဲ့လေ့လာနေအချိန်ကိုချွတ်နာရီနှင့်နာရီဖြတ်တောက်ရန်သော့ချက်. သငျသညျ prep tools တွေကို-ဗီဒီယိုများတိကျတဲ့အမျိုးအစားများနှင့် ပတ်သက်. အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာသိပြီးတာနဲ့, အော်ဒီယိုအကြောင်းအရာ, သို့မဟုတ်လုပ်နေသဖြင့်လေ့ကျင့်စမ်းသပ်ဘဏ်များသို့မဟုတ်မှတဆင့်စာအုပ်တွေ-လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်လာသည်နှင့်လေ့လာနေတစ်ခုချင်းစီတစ်မိနစ်ထက်ပိုအဖိုးတန်ဖြစ်လာ. သင်သည်သင်၏သင်ယူမှုစတိုင်ကဘာလဲဆိုတာအံ့သြနေပါလျှင်, ငါသတင်းအချက်အလက်ကိုသင်အထက်တွင် post ကိုထုတ်စစ်ဆေးနှင့်သင် process ကိုအတိအကျဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရန်အကြံပြုနှင့်လောင်. သငျသညျတကြ် CPA ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးသင်တန်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ရှေ့တော်၌ကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးလေ့လာသင်ယူဘယ်လောက်မသိအခြေခံအားဖြင့်ပိုက်ဆံလည်းမီးလောင်နေသည်!
ထို CPA စာမေးပွဲတွင်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောစမ်းသပ်ပြတင်းပေါက်ဘာတွေလဲ?
အဆိုပါစမ်းသပ်မှုအားလုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားကိုးရသောပေါ်တွင်သုံးလတစ်ကြိမ်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အချိန်ဇယားသို့ဆင်းကျိုးသည်. ဒါကြောင့်, ပထမသုံးလပတ်များအတွက်, သငျသညျဒုတိယလသို့ပထမဦးဆုံးနှစ်လနှင့်တစ်ဦးအပိုဆောင်းတစ်ဆယ်ရက်အတွင်းစမ်းသပ်ယူရ. ဒီပြီးတာနဲ့ စမ်းသပ်ခြင်းပြတင်းပေါက် ကျော်, အချိန်ဇယားရိုးရိုးကြောင်းပုံစံကို repeat. အများအားဖြင့်, သင်စမ်းသပ် ယူ. မသွားနိုင်သည့်အတွက်လေးပုံတစ်ပုံနှုန်း 20-ish နေ့ကကာလရှိပါတယ်. သင်သည်သင်၏လေ့လာနေစီစဉ်ခြင်းနှင့်မှန်မှန်ကန်ကန်သင့်ရဲ့စာမေးပွဲအချိန်စာရင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်, သငျသညျအကြမ်းဖျင်းတစ်နှစ်အတွက်တကြ် CPA ထွက်ခေါက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်!
တကြ် CPA စာမေးပွဲတွင် Creating လေ့လာမှုအချိန်ဇယား သင်တစ်ပတ်ကိုမွှုပျနှံနိုငျသညျမည်မျှနာရီရိုးရိုးသားသားအကဲဖြတ်အောင်အပေါ်မှီခိုဖြစ်ပါသည်. သငျသညျအချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျတစ်နေ့လျှင်တစ်ဦးအခြို့သောငွေပမာဏကိုလေ့လာချင်တာပေါ့, တနင်္ဂနွေအပေါ်အတန်ငယ်ရှည်အစည်းအဝေးများနှင့်အတူ. သငျသညျအလုပ်မလုပ်နေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျနှုန်းအချိန်ပိုကြီးတဲ့တုံးမွှုပျနှံနိုငျသညျနေ့က-key ကိုလေ့လာနေတဲ့တသမတ်တည်းအဆင့်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်, သင်သည်အခြားအပေါ်တနေ့အဘယ်သူမျှမအပေါ်သိပ်လုပ်ချင်ကြဘူးအဖြစ်. ထို CPA စာမေးပွဲတွင်အဘို့ကိုလေ့လာဖို့ဘယ်လိုသိမှတ်ကြလော့တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်ဦးချင်းစီအပိုင်းဖြတ်သန်းနှင့်ပျက်ကွက်အကြားခြားနားချက်ဖြစ်လိမ့်မည်.
သောတကြ် CPA စာမေးပွဲတွင်ပုဒ်မငါပထမဦးဆုံးယူသင့်တယ်?
သင့်ရဲ့ ပထမဦးဆုံးအတကြ် CPA စာမေးပွဲတွင် အပိုင်းသင်သည်သွားတာအကြောင်းကိုအများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချမှုခံစားရသောတဦးတည်းဖြစ်သင့်တယ်. အဘယ်ကြောင့်ထွက်ရှာတွေ့ဖို့အောက်ကဗီဒီယိုထုတ်စစ်ဆေး!